Haweenka qaba wadno xanuunka oo aan daryeel la mid ah kan ragga helin | Raadgoob
Haweenka qaba wadno xanuunka oo aan daryeel la mid ah kan ragga helin
araasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday inay yaraan lahayd dhimshada haweenka qaba wadna xanuunka, haddii la siiyo dawooyin la mid ah tan la siiyo ragga.
Dadka daraasadda sameeyay ayaa falanqeyn ku sameeyay 180,368 bukaanno u dhashay waddanka Sweden, kuwaas oo ay la soo derseen wadno xanuun tobankii sano ee la soo dhaafay.
Daraasaddu waxaa kale oo lagu sheegay inay u badan tahay in dumarka ay u dhintaan xanuunnada khatarta ah ee ku dhaca wadnaha, marka loo eego ragga.
Daraasadda waxay sheegeen in sababtu ay tahay kala duwanaanshaha qaabka loo xannaaneeyo .
Kooxda daraasadda sameysay oo ka socotay jaamaacadda Leeds iyo machadka Karolinska ee dalka Sweden oo faahfaahiyay ayaa intaa ku daray in xanuunkani uu yahay mid aad u khatar badan, maaddaama xididdada dhiigga ay xirmaan, sidaasi na loogu baahan yahay daaweyn degdeg ah.
Daraasadda waxaa kale oo lagu ogaaday in dumarka qaba xanuunka wadnaha ay boqolkiiba 34 yar tahay inay helaan tilmaamaha looga hortagi karo in xididdada dhiigga ay xirmaan.
Ku dhowaad 124,000 oo rag ah iyo 70,000 oo dumar ah ayaa sanad walba dalka Ingiriiska isbitaallada loo seexiyaa xanuunnada wadnaha ku dhaca.
‘Haweenku way dhimanayaan’
Daraasadda waxaa kale oo lagu ogaaday in dumarka ay u badan tahay inay la soo daristo xanuunno ay ka mid yihiin macaanka iyo dhiig karka, balse tani waxaa la sheegay in aysan ka dhigneyn kala duwanaanshaha jinsiga
Iyadoo daraasaddan lagu saleeyay Sweden, ayaa baarayaashu waxay ku doodayaan in xaaladda haweenka UK ay u badan tahay inay ka sii darto iyadoo qaar badan ay u dhimanayaan wadno xanuun waxaana kala duwanaansho aad ah ay u dhexeysaa sida loo daryeelo.
“Sweden waxay hormuud ka tahay daryeelka caafimaadka, iyadoo dad yar ay u hdintaan wadno xanuun, welina waxaan aragnaa farqiga u dhexeeya daaweynta iyo natiijada raga iyo haweenka,” ayuu intaas ku daray Prof Gale.
Prof Jeremy Pearson, oo ka tirsan Ururka Wadnaha ee Britain, oo qayb ka ahaa daraasadda, ayaa yiri: “Natiijada baaritaankan ka soo baxday waa mid walaac abuureysa.
“Waxaan degdeg ugu baahannahay inaan wacyi-gelin ka sameyno arrrintan iyadoo ah wax si fudud loo beddeli karo. Iyadoo la hubinayo in haween badan ay helaan daawooyinka lagula taliyay, waxaan awoodi doonnaa inaan qoysas badan ka caawinno inaysan dareemin xanuunka inay waayaan qof ay jecel yihiin oo u dhinta cudurka wadnaha.”